ပွဋ်ဌာနျးခကျြအမြိုးမြိုး | Samfunnskunnskap.no
နိုင်ငံသားတိုင်း အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်တယောက်ကို မိမိ၏ ပင်တိုင်ဆရာဝန်အဖြစ် ရပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ မိမိနေထိုင်မကောင်းသောအခါ ထိုဆရာဝန်ထံတွင် ပထမဦးဆုံးပြသတိုင်ပင်ရမည်။ ပင်တိုင်ဆရာဝန်သည် အခြားဆရာဝန်များထက်ဦးစွာ မိမိလူနာများကို ကူညီရန်တာဝန်ရှိသည်။ လူနာများကို အထူးကုဆေးခန်းဆေးရုံများသို့ ပြသရန်လွှဲပေးသည်မှာ ပင်တိုင်ဆရာဝန်သာလျှင်ဖြစ်သည်။
လူနာ၏သဘောတူခွင့်ပြှုချက်မရဘဲ ဆရာဝန်နှင့်လူနာတို့ပြောဆိုတိုင်ပင်ခဲ့သည်များကို မည်သူတဦးတယောက်ကိုမျှ ပြောမပြရန် ဆရာဝန်တွင် နှုတ်လုံရမည့်ဝတ္တရားရှိသည်။
ဆေးဆိုင်များသည် ဆေးဝါးများကိုရောင်းချပေးပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်နှင့် ဆေးဝါးသုံးစွဲနည်းများလမ်းညွှန်များလည်း ပေးနိုင်သည်။ ဆေးဝါးအများစုကို ဆေးဆိုင်တွင်သာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။ အပျော့စား အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကဲ့သို့သော အချို့ဆေးများကို ကုန်စုံဆိုင်များ (သို့) ဓာတ်ဆီဆိုင်များတွင်လည်း ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ဆေးဆိုင်တဆိုင်နှင့်တဆိုင် ကုန်စုံဆိုင်တဆိုင်နှင့်တဆိုင် ဈေးနှုန်းကွာခြားနိုင်ပါသည်။
ဆေးဝါးအများစုမှာ ဆေးညွှန်းစာပါမှသာ ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ဆရာဝန်နှင့်ဦးစွာ မတိုင်ပင်ဘဲ သင်ဝယ်ခွင့်ရမည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆရာဝန်က သင်မည်သည့်ဆေးမျိုးသုံးရမည်ဆိုသည်နှင့် မည်သို့သုံးရမည်ဆိုသည်ကို ဆေးညွှန်းစာတွင် ရေးပေးရမည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် ရေရှည်ကုသရမည့် နာတာရှည်ရောဂါတခုခုရှိနေလျှင်-ဆိုလိုသည်မှာ ကြာရှည်ခံစားရဦးမည့် ရောဂါတခုကို ဆေးသို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်း တခုခုသုံးပြီး တနှစ်အတွင်း သုံးလထက်မနည်း သုံးစွဲကုသနေရမည်ဆိုပါက – အပြာရောင်ဆေးညွှန်းစာဖြင့်ပေးသော ဆေးဝါးကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အပြာရောင်ဆေးညွှန်းစာဖြင့် ဆေးဝါးတခုခုရမည်ဆိုပါက အဆိုပါဆေးဝါးတန်ဖိုးကို လုံးဝပေးစရာမလိုတော့ပေ။ မိမိဖက်မှ အတွက်ကျဆေးကုခမျှသာ ပေးချေရန်လိုပြီး ကျန်သည့်အများစုကို နိုင်ငံတော်ကသာ အကုန်အကျခံပေးမည်ဖြစ်သည်။
အပြာရောင်ဆေးညွှန်းစာဖြင့်ပေးသော ဆေးများအတွက် အတွက်ကျဆေးကုခကို ဆရာဝန်ထံပေးရသည့် အတွက်ကျ ဆေးကုခများနှင့်အတူ အခမဲ့ဆေးကုခွင့်လက်မှတ်ရနိုင်စေရန် ထည့်တွက်သည်။
အသကျ ၁၈ နှဈပွညျ့ခြိနျအထိ ကလေးနှငျ့လူငယျမြားကို သှားစဈဆေးကုသပေးရနျ အခြိနျမှနျချေါယူစဈဆေးပေးသညျ။ အဆိုပါသှားစဈဆေးကိုသမှုအတှကျကုနျကငြှကေို အစိုးရက အကုနျအကခြံသညျ။ အသကျ ၁၈ နှဈနှငျ့ ၂ဝ အကွားရှိလူငယျမြားက ကုသခ၏ ၂၅% ကိုပေးခရြေပွီး အစိုးရက ၇၅% ကိုပေးခသြေညျ။ အသကျ ၂ဝ အထကျ လူကွီးမြားကမူ သှားကုသစရိတျကို အပွညျ့ပေးခရြေမညျဖွဈသညျ။ လူကွီးမြားအနနှေငျ့ ပုဂ်ဂလိက သှားဆရာဝနျကို မိမိဘာသာရှာယူရမညျဖွဈပွီး ထုံးစံအားဖွငျ့ သှားဆရာဝနျထံတှငျ တနှဈတကွိမျ ပွသစဈဆေးခံလရှေိ့ကွသညျ။
အကယ်၍ ကလေး (သို့) လူငယ်တယောက် သွားများညီအောင်တုပ်ဆိုင်းကာ ညှိပေးရမည်ဆိုပါက မိဘများက ထို အတွက်ကျဆေးကုခကို ပေးချေရမည်။
ဆေးရုံတက်ရန်မှာ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဆေးကုခြင်း၊ ဆေးရုံတွင်နေထိုင်ခြင်း နှင့် အစားအသောက်များအတွက် အစိုးရက အကုန်အကျခံသည်။
ဆေးရုံတက်ရန် ကြှိုတင်စီစဉ်သည်ဖြစ်ပါက မည်သည့်ဆေးရုံတွင်တက်လိုသည်ကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဆေးကုရန်စောင့်ဆိုင်းရမည့် ကာလ ကွာခြားနိုင်သည့်အတွက် http://www.frittsykehusvalg.no/ တွင် စစ်ဆေးကြည့်ရှုပါက ပိုမိုအကျိုးရှိနိုင်သည်။
အလွန်နည်းပါးလှသော ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ အနည်းငယ်ကိုလည်း နော်ဝေတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွင်တက်မည်ဟု ရွေးချယ်ပါက ကုသခအားလုံးကို မိမိဘာသာပေးချေရမည်။
ဆေးရုံရှိ ပြင်ပလူနာဌာနတွင် ကုသခြင်း
ဆေးရုံ၏ပြင်ပလူနာကုသမှု ဆိုသည်မှာ ဆေးရုံတခုတွင် ဆေးရုံမတင်ဘဲ ဆေးကုသပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ပေးထားသောရက်ချိန်းအတိုင်း သွားရောက်ပြီး ကုသမှုပြီးသည်နှင့် မိမိအိမ်မိမိ ပြန်နိုင်သည်။ ပြင်ပလူနာကုသမှုခံယူပါက ပင်တိုင်ဆရာဝန် (သို) အထူးကုဆရာဝန် ထံပေးသည့်နည်းတူ အတွက်ကျ ကုသခကိုပေးချေရမည်။
အထူကုဆရာဝန်ဆိုသည်မှာ သားဖွားမီးယပ်အထူးကု၊ အရေပြားအထူးကု၊ နား နှာခေါင်း လည်ချောင်းအထူးကု သို့မဟုတ် ကလေးအထူးကု ကဲ့သို့သော ဆရာဝန်များဖြစ်သည်။
အထူကုဆရာဝန်ထံပြသလိုပါက ပင်တိုင်ဆရာဝန် (သို့) အခြား အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်တယောက်ယောက်က ပြသကြောင်းလွှဲအပ်စာ ပါလာသင့်သည်။ မပါပါက အတွက်ကျဆေးကုခ ပိုမိုပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အရေးပျေါ လူနာတငျကား လိုအပျပါက အရေးပျေါတယျလီဖုနျးနံပတျ (113)သို့ သငျ ဖုနျးဆကျနိုငျသညျ။ ထိုအခါ အရေးပျေါ လူနာတငျကား ဆိုငျရာဌာနသို့ ဆကျသှယျမိမညျ။ လိုအပျသောအခကျြအလကျမြားကို သငျကမှနျမှနျကနျကနျပေးရနျ အရေးကွီးသညျ။
သင် မည်သူနည်း ?
(အမည်၊ တယ်လီဖုန်းနံပတ်၊ ကိုယ်ရောက်ရှိ ဖုန်းဆက်နေသည့်နေရာ)
(ဒဏ်ရာရသူ ဥိးရေ၊ ပြင်းထန်သောဒဏ်ရာ ဖြစ်မဖြစ် စသည်)
သင် မည်သည့်နေရာ ရောက်နေသနည်း ?
(လိပ်စာအတိအကျ (သို့) နေရာအကြောင်းဖော်ပြချက်)
ပငျတိုငျဆရာဝနျ၏ အလုပျခြိနျကြျောလှနျမှ အရေးပျေါကုသမှု လိုအပျလာလြှငျ သကျဆိုငျရာမွို့နယျရှိ အရေးပျေါလူနာဌာန(116 117)သို့ ဆကျသှယျနိုငျသညျ။
နော်ဝေနိုင်ငံရှိ မြှို့နယ်တိုင်းတွင် အရေးပေါ်ပြင်ပလူနာဌာနထားရှိရေး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ အရေးပေါ်ပြင်ပလူနာဌာနသည် ပုံမှန်ဆေးခန်းများပိတ်ထားချိန်ဖြစ်သော ညနေပိုင်းများ၊ ညများ နှင့် ရုံးပိတ်ရက်များတွင် ဖွင့်ထားလေ့ရှိသည်။
အရေးပေါ်ပြင်ပလူနာဌာနရောက်လျှင် ကုသမှုအတွက် အတွက်ကျကုသ၊ သုံးစွဲသောပစ္စည်းများတန်ဖိုး၊ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ နှင့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များကို ပေးချေရသည်။
မိမိနှင်သက်ဆိုင်သော အနီးဆုံး အရေးပေါ်ပြင်ပလူနာဌာန မည်သည့်နေရာတွင်ရှိကြောင်း စုံစမ်းထားသင့်သည်။
ဆရာဝနျဆီမှာ စမျးသပျကုသရတဲ့အခါ ကုနျကသြမြှကို အစိုးရက အမြားကွီးအကုနျအကခြံပေးပါတယျ။ လူနာကိုယျတိုငျကတော့ ကိုယျတှကျကဆြေးကုသစရိတျကိုပေးခရြေမှာဖွဈပွီး ကနျြတဲ့အပိုငျးကိုတော့ နိုငျငံတျောကပေးခပြေါတယျ။
ကိုယျတှကျကပြေးသှငျးငှေ အပွငျ ပတ်တီး, ထိုးဆေး, သောကျဆေး, ဓာတျခှဲစဈဆေးမှု နဲ့ အလားတူတှကေိုလညျး လူနာကပဲပေးခရြေပါမယျ။
အသကျ ၁၆ နှဈအောကျကလေးတှအေနနေဲ့ ကိုယျတှကျကပြေးသှငျးငှေ မပေးရပါဘူး။ ကိုယျဝနျဆောငျစဈဆေးစောငျ့ရှောကျမှု တှကေလညျး အခမဲ့ပါပဲ။
သာမနျအားဖွငျ့ ပငျတိုငျဆရာဝနျ ဆီတခေါကျသှားပွလို့ ပေးရတဲ့ ကိုယျတှကျကပြေးသှငျးငှဟော ခရိုနာ ၁၅၀ ကနေ ၃၀၀ လောကျဖွဈပါတယျ။
တနှဈအတှငျးမှာ ကိုယျတှကျကပြေးသှငျးငှေ အနနေဲ့ သတျမှတျထားတဲ့ငှပေမာဏတခုကို ပေးခခြေဲ့ပွီးပွီဆိုရငျ သငျ့မှာ အခမဲ့ဆေးကုခှငျ့လကျမှတျကိုရပိုငျခှငျ့ရှိလာပါပွီ။ အဲဒီငှပေမာဏကို ကိုယျတှကျကပြေးသှငျးငှအေဖွဈပေးပွီးသှားပွီဆိုရငျ အခမဲ့ဆေးကုခှငျ့လကျမှတျကို ကနျြးမာရေးစရိတျကွီးကွပျကှပျကဲရေးဌာန (Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)) က စာတိုကျကနအေရောကျပို့ပေးပါလိမျ့မယျ။ ဆရာဝနျနဲ့ပွတဲ့အခါ (သို့) အပွာရောငျ(အခမဲ့)ဆေးဝါးထုတျယူခှငျ့လကျမှတျ နဲ့ ဆေးဝါးဝယျယူတဲ့အခါမှာ အဲဒါကိုပွဖို့လိုပါတယျ။ ဒီနညျးနဲ့ ပွက်ခဒိနျနှဈကုနျဆုံးတဲ့အထိ ကိုယျတှကျကပြေးသှငျးငှေ ပေးခရြေတာကနေ ကငျးလှတျခှငျ့ရသှားပါလိမျ့မယျ။ helfo.no/frikort-for-helsetjenester-egenandelstak-1
https://helsenorge.no/ ဆိုတဲ့အငျတာနကျစာမကျြနှာမှာ ပငျတိုငျဆရာဝနျတှရေဲ့စာရငျးကိုတှနေို့ငျပါတယျ။ ကိုယျကွိုကျရာပငျတိုငျဆရာဝနျကိုရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။